Ukujongana neeSalathiso seSetyhula kwiiFomula zika-2010
UKUYA isetyhula reference kwenzeka xa iseli kwiphepha lokusebenzela le-Excel 2010 libhekisa kuyo, nokuba ngqo okanye ngokungathanga ngqo. Umzekelo, ukuba= 100 + A2kufakwa kwiseli ye-A2, emva koko kwenziwa isalathiso ngokuthe ngqo setyhula. Isalathiso setyhula esingathanga ngqo kuxa ifomula ekwiseli enikiweyo ibhekisa kwiseli enye okanye ezingaphezulu ekubuyiseleni kwiseli yoqobo. Umzekelo ifomula kwi-A1 ibhekisa kwiseli A2, A2 ibhekisa ku-A3, ize i-A3 ibhekisele ku-A1.
Amaxabiso epakethe yedosi
Xa i-Excel idibana nesalathiso setyhula kwiphepha lokusebenzela, isilumkiso seSetyhula ekubhekiswa kuso kwibhokisi yencoko. Unokukhetha ezimbini kule bhokisi yencoko yababini:
Cofa Kulungile ukwamkela ifomula njengoko injalo.
Cofa kuNcedo ukufikelela kwisihloko soNcedo kwisihloko seSalathiso seSetyhula.
Ukuba ubalo oluzenzekelayo lucinyiwe, isalathiso setyhula asibonwa de kube kwenziwa ukubalwa ngesandla (ngokucinezela F9) okanye useto lutshintshelwe kubalo oluzenzekelayo. Ungalutshintsha olo seto ngeqhosha lokukhetha ubalo kwiifomula tab.
Ukhetho olongezelelekileyo lokubala lunokuseta kwicandelo leeFomula kwibhokisi yencoko yebhokisi yencoko ye-Excel (cofa kwiThebhu yeFayile uze ukhethe Khetha). Qaphela ukuba Nika amandla ukubalwa kokuBalwa kwebhokisi yokujonga ilapha nayo. Xa oku kukhethiwe, izingqinisiso zetyhula ziyavunyelwa. Bawabala njani amaxabiso kule meko kuxhomekeke kubuninzi beZilungiso kunye noseto loTshintsho oluphezulu.
Ukuseta ukubala kunye nokucwangciswa kokucwangciswa kwibhokisi yencoko yababini ye-Excel.
I-Excel 2010 ibonelela ngenye indlela yokuzingela kwizalathiso zetyhula. Cofa utolo ecaleni kweqhosha lokujonga impazamo kwiqela lefomula yokuFomula kwithebhu yeefomula kwaye walathe kwisalathiso seSetyhula. Imenyu ebangelwayo ibonisa indawo yazo zonke iisetyhula kwiphepha lokusebenzela elisebenzayo. Ukucofa kwenye yeeseli ezidwelisiweyo kuya kukusa kwiseli kunye nesalathiso setyhula. Oku kukuvumela ukuba ufike kubo ngokulula endaweni yokuba uphonononge zonke iifomula zakho.
Ukuzingela izingqinisiso zetyhula ngokusebenzisa iFomula ithebhu.
ukuba wenze ntoni kwi-adderall
indlela yokubopha ukunitha
itorvastatin 80 mg ithebhu
yintoni i-bk virus
Iziphumo zoxinzelelo olukhulu
uncamathisela njani kwi-chromebook